Fasana Maro Sosona Ao An-tanànan’i Douma, Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2016 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, čeština , Español, English
Sarin'ireo fasana maro sosona taorian'ny daroka baomba. Sary: Antenimiera Sivily ao an-tanànan'i Douma, Facebook.
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Syria Untold ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty. Nosoratan'i Omar Youssef Souleimane tamin'ny teny Arabo ny tantara ary nadikan'i Maya Milani ho amin'ny teny Anglisy.
Nilatsaka tamin'ny trano, nanimba ny rihana aminy ny baomba. Saingy tsy nanjavona ity trano ity, lasa rihana ho an'ny fasana ambanin'ny tany izany ho an'ireo izay efa nonina tao anatin'ny rindriny ambony. Satria nahatonga ireo trano hiakatra avo kokoa ny habetsahan'ny mponina ao an-tanàna, mahatonga ireo fasana hanana rihana lalina kokoa ankehitriny ny habetsahan'ny fahafatesana. Izany no mahatonga ny mponin'i Douma manamboatra ny toerana hialàn'izy ireo sasatra mandrakizay. Mazava ho azy fa tsy ho sahirana amin'ny fitaovana fanorenana trano izy ireo; satria marobe ireo korontan-trano rava.
Nambara avy eo fa feno ny fasana, hoy ny mpikambana iray ao amin'ny filankevitra ao an-toerana ao amin'ny Douma tamin'i SyriaUntold. Na dia ny tany fambolena aza tsy ho ampy intsony. Tamin'ny 2015 fotsiny ohatra, maherin'ny 6000 ireo niharam-boina lavo tao amin'ny tanàna itatr'i Damaskosy, araka ny filazan'ny Foibe Fandraketana ny Fandikan-dalàna (VDC). Ampy handrava ny tany fambolena rehetra ao, izay iankinan'ny mponina tanteraka amin'ny famatsian-tsakafon'izy ireo izany tarehimarika izany. Noho izany, nandavaka andiana lavaka mirefy 3 metatra ny mpandavaka fasana, natao toy ny endrika tohatra ny fasana mba tsy hibahan-toerana kely kokoa.
Ao Douma, mety handevina olona niharam-boina am-polony ao anatin'ny iray andro ny olona, tahaka ny efa nataon'izy ireo taorian'ny vono olona tamin'ny 22 Aogositra 2015. Olona maherin'ny zato no maty tamin'izany andro izany, rehefa nandefa balafomanga maromaro tao amin'ny tsena be olona ao amin'ny faritra toeram-ponenana ao an-tanàna ny tafika an-habakabaky ny fitondrana. Izany no mahatonga ny olona avy ao Douma mila manakely toerana kokoa amin'ny toeram-pasana. Mety ho lafo vidy izany ho an'ny sasany manamboatra ny tranon'izy ireo miaraka amin'ny rihana maromaro, saingy lafo vidy kosa izany ankehitriny ho an'ny mponin'i Douma manamboatra ny fasan'izy ireo.
Ny ady nanomboka tamin'ny 2011 no nampianatra anay fa kisendrasendra ny fiainana sy ny fahafatesana eto amin'ity tany ity. Mety ho tafavoaka velona ny Syriana amin'ny alalan'ny fialàna tokontany iray, na ho faty noho ny fandraisana ny fiviliana marina amin'ny andro ratsy. Na izany aza, nampianatra anay ny fasan'i Douma fa manana ny endrika kantony manokana ny fahafatesana tamin'ity ady ity. Saingy tsy tahaka ny kanto mitahiry mandrakizay ny faty Faraonika, ny nihilisma (mametraka ny zava-drehetra ho tsy misy dikany) no manjaka amin'ny andro.
Mety ho tahaka ny tsotra izany tamin'ny voalohany, saingy mitaky fahamalinana be ny fanamboarana ireo fasana ireo, satria izay indro kely dia mety hiteraka lava-bato. Refesina amin'ny metatra marina tsara ny fampitoviana tantana ny fiakarana any ambonin'ny tany. Matetika ahitana rihana enina isaky ny fasana. Natomboka tao Douma izany famoronana izany ary niely haingana tany amin'ny tanàna hafa ao amin'ny tanàna itatr'i Damaskosy Ghoutah.
Amin'izany, mampahatsiahy antsika ny nataon'ny mponin'i Homs nanomboka ny taona 2011 izany; mamadika ny kianja filalaovan'izy ireo ho fasana. Mety ho tsara ny mahatsiaro fa fasana ny maro tamin'ireo zaridaina tany am-boalohany: ny Zaridaina Bab Houd ohatra, na ny Zaridaina ao amin'ny Lalana Damaskosy, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo. Noesorin'ny ady indray ireo zaridaina ireo tahaka ny nahafantarana azy tamin'ny folo taona lasa izay: fasana. Tsy manana anarana ny fasana sasany, na noho ny tsy fisian'ny olom-pantatra afaka mamantatra ny vatana mangatsiaka alohan'ny handevenana azy, na noho ny vatana mangatsiakan'izy ireo efa potipotika.
Na izany aza, ny anjara ratsin'ireo niharam-boina ao Douma dia tsy vitany hoe tsy manana anarana ny fasana sasany, fa voadaroka baomba mihitsy aza ireo fasana ireo. Tamin'ny 14 Febroary 2016, voadaroka baomba ny fasana ao an-tanàna, anisan'izany ireo fasana maro-sosona marobe. Tamin'io andro io, namoy ny ainy i Kasem Ballah, mpitantana ny fasana ao amin'ny vaomiera Douma eo an-toerana. Nandevina ny zanany roa manokana izy, Osama sy Yumna, andro vitsy monja talohan'izany. Matin'ny daroka baomba ihany koa izy ireo. Tsy fantatray raha fasan'izy ireo, na an'olon-kafa, no rava tamin'io andro io.
Matetika alevin'ny fitondrana ao amin'ny fasana tambabe ireo nandresy tambanin'ny fampijaliana. Saingy nanakana ny olona ao Douma tsy handevina azy ireo tahaka izany (ao anaty fasana tambabe) ny fanajana ireo niharam-boina. Raha ho an'ny ISIS, fara-faharatsiny tsy hanimba ireo fasana ireo tahaka ny nataon'izy ireo tany amin'ny faritra feheziny izy ireo. Tsy eo ambonin'ny tany izy ireo, araka izany, tsy ho “voatohintohina ny finoana an'Andriamanitra tokana” amin'ny alalan'ny fiakarana avo loatra, araka ny teolojia wahabita an'izy ireo.
Indray andro angamba, ho tonga ao Douma ny mpikaroka, hikaroka ny sivilizasiona efa lany tamingana. Hahita ny antony izy ireo, ary hampahatsiahy fa manana ny ambaratongany ny fahafatesana ao Douma, tahaka ny ataon'ny fiainana.